Football Khabar » पहिलो हाफमा बार्सिलोनाविरुद्ध नापोली १–० ले अघि !
पहिलो हाफमा बार्सिलोनाविरुद्ध नापोली १–० ले अघि !
युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगितामा अन्तिम १६ अन्तर्गत पहिलो लेगको खेलमा यतिबेला इटालियन क्लब नापोली र स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाको खेल जारी छ । नापोलीको घरेलु मैदानमा जारी खेलको पहिलो हाफमा घरेलु टोली नापोलीले बार्सिलोनाविरुद्ध १–० को अग्रता लिएको छ ।
घरेलु दर्शकमाझ खेलिरहेको नापोलीका लागि खेलको ३०औं मिनेटमा ड्रिएज मार्टिन्सले शानदार गोल गरेका थिए । बार्सिलोनाका डिफेन्डरबाट बल खोसेर जिलिन्स्कीले दिएको पासमा अनमार्क रहेका मार्टिन्सले बक्सबाहिरबाट हानेको शक्तिशाली प्रहारले सोझै जाली चुमेको थियो । उनको प्रहार बार्सिलोनाका गोलकिपरले रोक्न प्रयाससमेत गर्न भ्याएनन्
उता, यसैबेला जारी दोस्रो खेलमा इंग्लिस क्लब चेल्सी र जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखको खेल जारी छ । चेल्सीको घरेलु मैदानमा जारी सो खेलको पहिलो हाफ ०–० मा सकिएको छ ।
प्रकाशित मिति १४ फाल्गुन २०७६, बुधबार ०२:३१